ဒီနွေဦး(ဇာတ်လမ်းတို)… – PVTV Myanmar
Like – 6K Share – 638
ထိရှ တယ် ကြေကွဲစရာ
ဒီလှိုင်း သစ် says:
2021-05-30 at 4:14 PM
2021-05-30 at 4:45 PM
ဒါမျိုးလေးတွေ ကောင်းတယ်ဗျ၊ အကြံပေးချင်နေတာကြာပြီိ။ လွတ်မြောက်နယ်မြေထဲရောက်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ပေါင်းပြီး PDF နဲ့ ပြည်သူနဲ့ ပူးပေါင်းဆင်နွှဲတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ရိုက်ပါလား။ ပြည်သူကိုလည်း စည်းရုံးပြီးသား ဖြစ်တယ် …. အလွမ်းလည်း ပြေတယ်။
နင္ဆိုတာငါ့ဘဝရဲ႕ အလင္းေရာင္ေလးပါ says:
2021-05-30 at 5:16 PM
2021-05-30 at 5:19 PM
အရမ်းကောင်းပါတယ် အရမ်းလည်းကိုယ်ချင်းစာမိတယ်. ဒါပေမယ့် စစ်ခွေးတွေနဲ့ ဒံလန်တွေက နားလည်မဟုတ်ဘူး
ဒီလိုဘာသာတွေက နှလုံးသားရှိတဲ့ သူတွေပဲ့ နားလည်ပါတယ်.
2021-05-30 at 5:38 PM
ကြေကွဲ ဝမ်းနဲ ရင်ကွဲ
နွေဦး နွေဦး နွေဦး
ဘယ်သော ခါ ဘယ်သော နေ့ အေးချမ်း သာယာ‌သော ချိန်ခါ
2021-05-30 at 6:22 PM
Naw Htwe Htwe says:
2021-05-30 at 6:42 PM
2021-05-30 at 6:47 PM
အဖြူရောင် ကောင်လေး says:
KhinSan Yura says:
2021-05-30 at 7:15 PM
Marla Lan says:
May Myanmar people get back the freedom and human rights that they deserve. Praying for all of you. 🙏
2021-05-30 at 7:56 PM
2021-05-31 at 11:16 AM
Ag Ag Pyae says:
Mg Mg Myint says:
2021-06-01 at 8:12 PM
အခုတော့ ပြန်လည်စည်ကားနေပီ ရုံးတွေလည်း တချို့ ပြန်တက်ကုန်ကြပီ
Mamawii Bawitlung Hualngo says:
2021-06-05 at 8:54 AM
Moe Sanwin says:
2021-06-06 at 5:03 PM
2021-06-23 at 12:16 PM
Ye Min Tun says: